Isbahaysiga Jubilee oo la weydiiyay in ay sheegan halka ay ka keenen lacagaha ay u adeegsanaayan in ay ku mideeyan xisbiyada dalka ka jiro – The Voice of Northeastern Kenya
Isbahaysiga Jubilee oo la weydiiyay in ay sheegan halka ay ka keenen lacagaha ay u adeegsanaayan in ay ku mideeyan xisbiyada dalka ka jiro
4 kamid ah xildhibaanada xisbiga ODM ayaa waxa ay ka codsadeen madaxweyne Uhuru Kenyatta in u sharaxaad ka bixiyo halka ay ka keenen lacagaha la doonayo in loo isticmaalo mideeynta xisbiyada dalka ka jiro oo lagu wado in ay dhamaan hoos yimaadan dalada isbahaysiga weyn ee Jubilee alliance party.
Hoggaamiyaashan ayaa waxa ay dawladda maalinta shalay ahayd ku eedeyn in ay lacagaha dadweynaha ay u isticmalaayan in ay ku sasabtaan hoggaamiyaasha xisbiyada yar in ay isbahaysigooda ku soo biiran.
Isbuuci aanu soo dhaafnay ayay ahayd marki 9 xisbi oo ay ku jireen xisbiyada TNA iyo URP oo ay kala hoggaamiyaan madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka ay sheegen in ay xisbiyadooda kala direen oo ay kuwada midoobi doonan isbahaysiga salka balaaran ee Jubilee Alliance Party.
Senetarka laga soo doortay Countiga Siaya James Orengo,wakiilada haweenka ee countiga Homa Bay Gladys Wanga iyo xildhibaanada kala ah Junet Mohammed oo laga soo dortay bariga Suna iyo Joseph Oyugi Magwanga oo isna laga soo doortay deeganka Kasipul ayaa waxa ay isbahaysiga Jubilee ka codsadeen in ay cadeeyan sida ay wax u jiraan.
Junet Mohamed ayaa sheegay in xisbiyadan isbahaystay aysan cabsi galin doonin maadama ay yihiin kuwi ay isku qabteen doorashada dalka ka dhacday sanada 2013-ka oo aysan jirin wax isbadal ah.
Junet oo hadalkiisa sii wato ayaa waxa u sheegay in qaar kamid xisbiyada hoostaga dalada Jubilee Alliance Party aysan wax saameyn ah ku lahayn siyaasada dalka.
← Maxkamadda oo ammar ay soo saartay ku sheegtay in macaalimiinta hawlgabka ah lacagahooda la siiyo
11 ruux oo ku dhintay duqeyn dhinaca cirka ah ee lagu qaaday isbitaal kuyaala waddanka Yemen →